BBC Somali - Warar - Yaa hadda maamula Kismaayo?
Yaa hadda maamula Kismaayo?
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 30 September, 2012, 03:08 GMT 06:08 SGA
Magaalada Kismaayo oo shalay aroortii hore ay ka baxeen xoogagii al-Shabaab, ayaanay ilaa hadda galin ciidamada Kenya iyo kuwa dowladda.
General Cabdikariin Yuusuf Dhagabadan, abaanduulaha ciidamada Soomaaliya, ayaa sheegay in ay amreen in ciidamadu aysan galin magaalada tan iyo inta laga xaqiijinayo in aanay goobaha qaar miino u aasnayn.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in marka hore amniga la sugo.
Ilaa sadex kun ay dhan yihiin ciidamada dowladda ee ku sugan gobolada Jubbooyinka, waxaana uu sheegay in Kismaayo loo maamuli doono qaab dowladeed oo aanay gacanta u gali doonin koox gaar ah.